Chii chinonzi psychologist? | Kuumbwa uye kudzidza
Chii chinonzi chiremba wezvepfungwa?
Iwo ehunyanzvi ehutano akawana kutaridzika kwakakosha mune inoitika mamiriro, mune inoshamisa nguva yakatarwa nedenda. Hupenyu hwemunhu haungovimbe nehunhu hwemuviri, ndege yepfungwa yakakosha.
Naizvozvo, ruzivo rwehunyanzvi rwevezvepfungwa rwakakoshawo panguva ino yenhoroondo, sezvo nyanzvi dzakagovana mazano uye mazano akanangana nekusimudzira kuzvitarisira, kusimudzira hunyanzvi hwemagariro, kuchengetedza tsika dzakanaka nekusimbisa kusimba.
Nyanzvi yezvepfungwa inyanzvi ine hunyanzvi hwekuyunivhesiti uyo ane hunyanzvi uye hunyanzvi hunodiwa kuti uperekedze vanhu mukuvandudza nzira dzekurwisa matambudziko. Kana, zvakare, kuti uwane mufaro. Icho chisungo chinogadzirwa nemurapi wezvepfungwa nemurwere muchiitiko chechirapa chinogara mukutendeka nekuvanzika.
1 Kutarisisa kwepfungwa
2 Makosi uye mashopu anodzidziswa nevepfungwa
3 Basa renyanzvi yezvepfungwa mubhizinesi renyika
Zviitiko, pfungwa uye manzwiro ayo munhu anogovera nehunyanzvi zvinoramba zviri padanho rehukama. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hushamwari zvakare injini yekuwedzera yako pachako uye yehunyanzvi kusimba. Kunyange zvakadaro, pane mamiriro ezvinhu umo munhu anogona kutora danho rekukumbira rubatsiro rwakakosha kutarisana nechinangwa.
Kuteerera ndehumwe hunyanzvi hunowanikwa nenyanzvi yepfungwa. Kuteerera uko kunoperekedzwa nekuremekedza chokwadi cheicho chimwe. Nyanzvi yezvepfungwa haiongorore mamiriro ezvinhu kana zvitendero zvemupinduri kubva mumaonero ake. Wese munhu ane nhoroondo, chiitiko, uye mamiriro. Naizvozvo, pane akasiyana akasiyana anokanganisa kutora sarudzo.
Kune mamiriro ezvinhu akasiyana umo munhu anogona kutanga kurapwa kwepfungwa: kukunda kuora mwoyo, kurarama nenzira inoshungurudza, kukunda kurambana kunorwadza, kudzokorora kufunga kwakashata, kushushikana kusingaperi, kushushikana, kushushikana pamoyo, kuzvitutumadza ... Kurapa kwepfungwa Iko inogona zvakare kukurudzirwa nechishuwo chekuita shanduko yemararamiro.
Chikamu chezvepfungwa chakashanduka chichienderana netekinoroji, sezvakaita dzimwe nzvimbo dzenzanga. Uye, nhasi, vazhinji nyanzvi vanopa rubatsiro rwepamhepo. Sevhisi yakakosha pakuderedza chinhambwe nekusvika kune vateereri.
Makosi uye mashopu anodzidziswa nevepfungwa
Nyanzvi yezvepfungwa inogona kugovera ruzivo rwake kwete chete kuburikidza nehunyanzvi hwekurapa sevhisi, asi zvakare kuburikidza neakakura makosi makosi uye mashopu. Makosi anogona kutenderera akakosha misoro yemunhu kuve se hukama hwehukama, kutaurirana kwakasimba, hukama, kutsvaga mufaro kubasa, kudzivirira kusagadzikana, kuzviziva-ruzivo uye kufungidzira. Kune rimwe divi, vamwe vanamazvikokota vanosarudzawo kutsikisa mabhuku ane zvemukati zvinoenderana neruzivo rwesainzi.
Basa renyanzvi yezvepfungwa mubhizinesi renyika
Tarenda revanyanzvi vezvepfungwa zvakare riri kudiwa zvakanyanya nemakambani. Kubva pane maonero esangano, kukwezva, kuchengetedza nekuchengetedza tarenda kwakakosha, pamwe nekugadzira nzvimbo yakanaka yebasa. Chero kambani inoumbwa nevanhu uye, nekudaro, zvakakosha kuti utarise nzvimbo yemabhizimusi inopfuura mhedzisiro maererano nepundutso.
El basa rezvepfungwa Inogona kuve yakakosha mukujekesa kwemaitiro esarudzo, asi zvakare inopa zano rakanangana nehukama nehutungamiriri, kurudziro kana muhoro wemweya. Zvinotarisirwa nevashandi zvinopfuura muhoro wezvehupfumi, zvakafanira kuti vanzwe kukosheswa nesangano ravanoshandira.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kuratidzwa kuti psychology ine dzakasiyana minda yekushandisa. Naizvozvo, inogona zvakare kuve yakatarisana nemitambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Chii chinonzi chiremba wezvepfungwa?
Ungave sei muzvinabhizimusi? Matipi mashanu
Chii chinonzi coaching?